Dowladda Qatar oo war ka soo saartay qarixi shalay Gaalkacyo ka dhacay – Radio Daljir
Dowladda Qatar oo war ka soo saartay qarixi shalay Gaalkacyo ka dhacay
Maajo 18, 2020 7:00 b 1
Dowladda Qatar ayaa dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Shacabka Soomaaiyeed uga tacsiyadeysay dadkii ku dhintay weerarkii isqarxinta ahaa ee ka dhacay Magaalada Gaalkacyo laguna dilay guddoomiyhii Gobolka Mudug.
War kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Qatar ayaa lagu cambaareeyay qaraxaas,waxaana lagu sheegay in dowladda qatar ay ad uga xun tahay sidoo kalena ay kasoo horkeedo fal kasta oo abuuri kara colaad iyo mid argagaxiso.
Wakaalladda Wararka Qatar ee Qatar News Agency “QNA” oo baahisay warkaan ayaa sheegtay in ay uga tacsiyadeynayaan dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda falkaas,isla markaana ay garab taagan yihiin.
Weerarkii isqarxinta ahaa ee ka dhacay Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa waxaa ku dhintay Guddoomiyihii Gobolka Mudug Puntland Axmed Muuse Nuur iyo Saddex kamid ah ilaaladiisa oo uu kamid ahaa walaalkiis.
Awood qaybsiga Galmudug oo laga cabanayo (dhegayso)
Khilaafka Kenya iyo Somaaliya oo markale soo cusboonaday (dhegayso|daawo)
abdullahi 3 weeks ago
Dowladda Qatar haddii ay cid uu tacsineyso waxaa ku habbona in ay uu tacsiyeeyso shacabka iyo dpowladda PL oo ay dowladda qatar hagardaamo badan ku hayso iyo falaal argagixiso oo ka maalgaliso deegannada Pl sidiiba horey New York Times lagu qoray. Qatar dambiyo badan bay PL ka gashay oo ay ka mid ahayd dilki Farmosa iyo malgalintii Atam intu falalka dambiyeed ka geystay gobolka bari. Qatar way ogtahay wayna wali sii waddaa dhib ka aburidda dhulka PL. Dhawaan deeq bay geysay SL lakin PL maya ayey ka tiri.